War - Maxay xusulkaagu u xun yahay?
Muxuu xusulkaagu raaxo u lahayn?
Saaxiibbada jecel inay ciyaaraan tennis, badminton iyo tennis miiska waxay dhaawici doonaan xusullada markay ciyaarayaan kubbadda, gaar ahaan markay gadaal u ciyaarayaan. Khubarada ayaa noo sheegaya tan waxaa badanaa loo yaqaan "xusulka teniska". Iyo xusulka tennis-ka inta badan waa daqiiqada kubbadda la garaacayo, kala-goysyada curyaamku ma istaagna, ma jiro curcurka qufulka, muruqa dheereynta murqaha ayaa si xad dhaaf ah loo kala bixiyaa, taasoo keenta dhaawac ku-xirnaanta. Suxulka ay sameeyeen humerus, lafaha jilicsan iyo ulna Waxay ku biirtaa gacanta sare iyo gacanta hoose, waxay si isku mid ah u dhex gashaa dhaqdhaqaaqa cududda waxayna ka dhigeysaa gacanta mid foorara, kala bixisa oo wareegeysa si waxqabad fiican loo sameeyo. Si kastaba ha noqotee foosha soo noqnoqota, jimicsi xad dhaaf ah, naxdin lama filaan ah, oo keenta daal jilicsan, caabuq iyo barar, sida "xusulka teniska" iyo "xusulka golf". Tani waxay sidoo kale saameyn ku yeelan doontaa shaqada gacanta, taasoo keeneysa in xusulka dhaqdhaqaaqa xagal xaddidan. Intaas waxaa sii dheer, dhaawaca muruqyada gacanta sare waxay saameyn ku yeelan doonaan foorarka iyo toosinta xusulka.
Ujeedo jilicsanaanta inta badan ku dhaawacanta xusulka, ilaaliyaha suxulka wuxuu sameeyaa cadaadis ku habboon si loo xakameeyo shaqada jilibka dhaawacmay loona yareeyo heerka dhaawaca uu uga sii daray foosha xad dhaafka ah. Naqshadeynta suxulka ilaaliyaha ayaa xitaa yareyn kara xanuunka oo iska ilaalin kara daalka, wuxuuna ka caawin karaa shaqada gacanta inay isku xirnaato.
Xusulka Brace Astaamaha 1. Daaweynta-ku-daweynta: Daaweynta kuleylka iyo kuleylka qoyan ayaa ah daaweynta ugu muhiimsan ee dhaawacyada kala-goysyada iyo jilicsanaanta ay bixiyaan inta badan tababarayaasha iyo dhakhaatiirta dhaqan celinta. Ilaaliyaha suxulka wuxuu ka sameysan yahay maro jilicsan oo heer sare ah, oo gebi ahaanba u dhowaan kara goobta isticmaalka, ka hortaga lumitaanka heerkulka jirka, yareynta xanuunka qaybta ay dhibaatadu saameysey, iyo dardargelinta soo kabashada. 2. Kor u qaadista wareegga dhiigga: Sababtoo ah kuleylka daaweynta ee uu hayo ilaaliyaha xusulka, kor u qaadista wareegga dhiigga ee unugyada muruqyada goobta la isticmaalayo. Saameyntani waxay faa'iido badan u leedahay daaweynta xanuunka 'arthritis' iyo xanuunka kalagoysyada. Intaas waxaa sii dheer, wareegga dhiigga oo wanaagsan ayaa door muhiim ah ka ciyaari kara dhaqdhaqaaqa muruqyada isla markaana yareyn kara dhaawaca. 3. Taageerida iyo xasilinta saameynta: xusulka ilaaliyaha ayaa kor u qaadi kara wadajirka iyo lafdhabarta si looga hortago saameynta xoogga dibadda. Ilaalin wax ku ool ah ee kala-goysyada iyo xididdada.
4. Qalab fudud, laastikada neefsan kara, raaxo leh in la xidho, oo leh taageero wanaagsan iyo yareynta naxdinta, mashiinka la dhaqi karo, si fudud loo xidho, ku habboon orodka, ciyaaraha kubbadda iyo ciyaaraha isboortiga.
Dadka qaarkiis waxay jecel yihiin qaar ka mid ah isboortiga xad dhaafka ah, waa inay xirtaan qalabka ilaalinta ee xirfadleyda ah, si looga hortago dhaawacyada. Ugu dambeyntiina, waa inaan idin xusuusinno in qalabka wax ilaaliya uu kaliya ka ciyaarayo kaalin ilaalin oo isboorti ah, sidaas darteed marka lagu daro xirashada qalabka wax lagu ilaaliyo, waa inaan isku daynaa inaan xakameyno dhaqdhaqaaqyada farsamo ee joogtada ah, oo aan si adag u hoggaansanno xeerarka tartanka.